BS dingana telo
Fotodrafitrasa mandroso farany (AMI)
Vahaolana N +
Tetikasa fampandrosoana sy famatsiam-bola
Vahaolana N + rehetra
Vahaolana fitantanana fahombiazana angovo
Fandrefesana haingam-pandeha mahomby any Moyen Orient
Zavamaniry Linyang PV any Shina
Tetikasa serivisy fampidirina angovo ao amin'ny làlambe Zhangshi
Smart Keypad miorina amin'ny dingana telo mialoha metatra LY-SM350
Meteritra tsy mivantana ankolaka telo (CTVT miasa) LY -...
Meter Smart Indirect Indirect (CT Operated) LY-SM ...
Mirefy dingana tokana mahazatra
LY-BM11 metatra dia metatra fizarana tokana mahazatra mahomby, azo ampiharina amin'ny mpanjifa monina sy ny tetikasa fandrefesana ambany. Izy ireo dia marina sy voaambina tsara miaraka amin'ny fiasa manohitra ny fanodikodinam-bola, mety amin'ny vahaolana amin'ny fanangonam-bola mora vidy sy fiarovana.
LY-BM11 metatra dia natao nifototra tamin'ny rafitra miovaova izay manome safidy maromaro mifanaraka amin'ny takian'ny tsena sy ny mpanjifa.
Metera elektrika mialoha mialoha an'ny elektrika mialoha LY-SM150
Ny metatra mialoha ny LY-SM150 dia mandroso metatra elektrika dingana tokana AMI, miaraka amina keypad / karazana Smart Card ary / na safidy karazana keypad mizara. Ny mampiavaka azy ireo ny maodelim-pifandraisana plug-and-play dia miteraka ny fifanakalozana sy ny fampiasana isan-karazany ny fifandraisana an-tariby tariby sy tariby tsy mitombina, mety ho an'ny mpanjifa C&I haben'ny trano sy kely.
Ny metatra andian-dahatsoratra mialoha mialoha an'ny LY-SM150 dia marina amin'ny fandrefesana & fanaraha-maso ny enta-mavesatra sy ny mason-tserasera ary koa ny fiasan'ny fanoherana, mahatonga azy ireo ho mendrika amin'ny vahaolana amin'ny fanangonana vola sy fiarovana. Izy ireo dia namboarina mifototra amin'ny Token 20-bit mifanaraka amin'ny STS na CTS, manara-penitra tanteraka amin'ny DLMS / COSEM, fenitra IDIS ary voamarina amin'ny mari-pahaizana DLMS, MID, IDIS, STS, SABS hiantohana ny fifandraisan'izy ireo amin'ny sehatra AMI.
C&I CT / PTCT dingana telo CT / PTCT Connected Smart Energy Meter dia Smart Meter tena mandroso handrefesana angovo mihetsika AC / mihetsika rehafa miaraka amin'ny 50 / 60Hz matetika. Izy io dia manana lahasa hafahafa isan-karazany mba hahatsapany ny fandrefesana & fitantanana angovo amin'ny alàlan'ny fahitana avo lenta, fahatsapana tsara, fahamendrehana tsara, fari-pandrefesana, fanjifana ambany, firafitra matevina ary fisehoana mahafinaritra, sns.
Linyang Split-type Single-phase DIN rail mounting Keypad Preayment Energy Meter dia metatra angovo IEC mahazatra ampiasaina handrefesana angovo miasa AC amin'ny dingana iray miaraka amin'ny 50 / 60Hz matetika ary ny fiasa mialoha amin'ny alàlan'ny keypad sy TOKEN. Rehefa te-hividy herinaratra ny mpanjifa, ny teboka Vending dia hanome azy ireo TOKEN 20-voahita miaraka amin'ny mombamomba ny fiampangana herinaratra. Ny mpanjifa dia mampiditra ny TOKEN ao anaty metatra avy amin'ny keypad, ary avy eo dia mamaritra ny TOKEN ny metatra ary mameno ny metatra. Ny fiampangana TOKEN dia misy isa 20. Ny protokolon'ny famindrana data dia fitarainana amin'ny fenitra STS.
LY-SM300 metatra dia mandroso amina metatra elektrika dingana telo amI, miaraka amina endri-javatra mampiavaka ny modely fifampiresahana plug-and-play, mamorona ny fifanakalozana sy ny fampiasana karazan-tariby tariby tariby sy tsy misy tariby azo antoka, azo ampiharina amin'ny mpanjifa C&I kely sy lehibe.
Ny metatra LY-SM300 dia manome fantsom-pahalalana avo lenta sy fahamendrehana amin'ny fandrefesana sy fanaraha-maso ny enta-mavesatra ary ny fari-pifandraisana ary koa ny fanoherana ny fanodikodinam-bola, mahatonga azy ireo ho mendrika amin'ny fanangonana vola sy vahaolana fiarovana. Natao mifanaraka tanteraka amin'ny fari-pitsipika DLMS / COSEM IEC izy ireo ary voamarina amin'ny fanamarinana DLMS.
LY-SM160 metatra dia mandroso amina metatra herinaratra dingana tokana amina AMI, miaraka amina modely fifandraisana plug-and-play tsy misy tariby PLC sy / na Wireless, azo ampiharina amin'ny mpanjifa C&I kely sy lehibe.
Ny metatra LY-SM160 dia manome fantsom-pahalalana avo lenta sy fahamendrehana amin'ny fandrefesana & fanaraha-maso ny enta-mavesatra ary ny fari-pifandraisana ary koa ny fanoherana ny fanodikodinana, mahatonga azy ireo ho fitaovana mora vidy ho an'ny fanangonam-bola sy vahaolana fiarovana. Natao mifanaraka tanteraka amin'ny fenitra DLMS / COSEM sy IDIS izy ireo ary voamarina amin'ny mari-pahaizana DLMS sy MID hiantohana ny fifandraisan'izy ireo amin'ny sehatra AMI.
LY-SM300-CT dia mandroso amI ankolaka telo metatra mandeha amin'ny herinaratra izay manome fitaovana azo antoka tsara amin'ny kilasy 0.5s / 0.2s sy azo itokisana avo lenta, azo ampiharina amin'ny mpanjifa C&I isan-karazany ary koa ny metation. Asongadin'izy ireo miaraka amina asa matanjaka ao anatin'izany ny fandrefesana sy ny fanaraha-maso ny enta-mavesatra ary ny fari-pifandraisana amin'ny alàlan'ny herinaratra marobe sy ny elanelam-potoana ankehitriny, ny fanaraha-maso ny kalitaon'ny herinaratra ary koa ny fandrefesana THD sns.
Ny famolavolana modular an'ny LY-SM300-CT dia manome safidy isan-karazany azo ampifandraisina amin'ny fifandraisana an-tariby sy tsy misy tariby. Izy ireo dia voamarin'ny MID, DLMS / COSEM ary IDIS mba hiantohana ny sehatra fandrefesana azo itokisana sy azo ampifandraisina amin'ny rafitra AMI.
Smart Three Phase Indirect Meter (CTVT miasa) LY-SM300-CTVT
LY-SM300- CTVT dia mandroso amI metatra elanelam-potoana tsy misy fatra telo izay manome fitaovana azo antoka tsara amin'ny kilasy 0.5s / 0.2s sy azo itokisana avo lenta, azo ampiharina amin'ny mpanjifa C&I isan-karazany ary koa ny metation. Asongadin'izy ireo miaraka amina asa matanjaka ao anatin'izany ny fandrefesana sy ny fanaraha-maso ny enta-mavesatra ary ny fari-pifandraisana amin'ny alàlan'ny herinaratra marobe sy ny elanelam-potoana ankehitriny, ny fanaraha-maso ny kalitaon'ny herinaratra ary koa ny fandrefesana THD sns.
Ny endrika maodelin'ny LY-SM300- CTVT dia manome safidy azo ampifandraisina amin'ny fifandraisana tariby sy tariby tsy misy tariby. Izy ireo dia voamarin'ny MID, DLMS / COSEM ary IDIS mba hiantohana ny sehatra fandrefesana azo itokisana sy azo ampifandraisina amin'ny rafitra AMI.
Ny andiana prepaid LY-SM350 dia mandroso amina metatra elektronika am-pahefana telo ampa mahery am-paosy, miaraka amina karazana keypad / karazana Smart Card ary / na safidy karazana keypad voazarazara, afaka ampiarahina amin'ny maody Prepaid na Postpaid izy ireo. Ny mampiavaka azy ireo ny maodelim-pifandraisana plug-and-play dia miteraka ny fifanakalozana sy ny fampiasana isan-karazany ny fifandraisana an-tariby tariby sy tariby tsy mitombina, mety ho an'ny mpanjifa C&I haben'ny trano sy kely.
Ny metatra andiany mialoha mialoha an'ny LY-SM350 dia marina amin'ny fandrefesana sy fanaraha-maso ny enta-mavesatra sy ny mason-tserasera ary koa ny fiasan'ny fanoherana, mahatonga azy ireo ho mendrika amin'ny vahaolana amin'ny fanangonana vola sy fiarovana. Izy ireo dia namboarina mifototra amin'ny 20-bit Token based STS na CTS, miaina tanteraka amin'ny DLMS / COSEM, fenitra IDIS ary voamarina miaraka amin'ny mari-pahaizana DLMS, MID, IDIS, STS, ary SABS hanomezana toky ny fifandraisan'izy ireo amin'ny sehatra AMI.
LY-SM360 metatra dia mandroso amina metatra herinaratra dingana telo AMI, miaraka amina modely fifandraisana plug-and-play tsy misy tariby PLC sy / na Wireless, azo ampiharina amin'ny mpanjifa C&I kely sy lehibe.
Ny metatra LY-SM360 dia manome kojakoja manana fahamendrehana avo lenta sy azo itokisana amin'ny fandrefesana & fanaraha-maso ny enta-mavesatra ary ny fantsom-pifandraisana ary koa ny fanoherana ny fanelingelenana, mahatonga azy ireo ho fitaovana lafo vidy ambany indrindra ho an'ny vahaolana amin'ny fanangonana vola sy fiarovana. Natao mifanaraka tanteraka amin'ny fari-pitsipika DLMS / COSEM sy IDIS izy ireo ary voamarina amin'ny mari-pahaizana DLMS, MID hiantohana ny fifandraisan'izy ireo amin'ny sehatra AMI.
Ny metatra postpaid an'ny LY-SM150 dia mandroso metatra dingana tokana am-pahefana AMI, miaraka amina endrika mampiavaka ny modely fifampiresahana plug-and-play, mamorona ny fifanakalozana sy ny fampiasana karazan-tariby fifandraisana tariby tariby sy tsy misy tariby azo antoka amin'ny C&I mpanjifa.
Ny metatra postpaid an'ny LY-SM150 dia marina amin'ny fandrefesana & fanaraha-maso ny enta-mavesatra sy ny mason-tserasera ary koa ny fiasan'ny fanoherana, mahatonga azy ireo ho tsara amin'ny vahaolana amin'ny fanangonana vola sy fiarovana. Natao mifanaraka tanteraka amin'ny fenitra DLMS / COSEM sy IDIS izy ireo ary voamarina miaraka amin'ny mari-pahaizana DLMS, MID, IDIS mba hiantohana ny fifandraisan'izy ireo amin'ny sehatra AMI.
LY-SM350 postpaid metatra dia mandroso AMI metatra telo metatra, miaraka amin'ny endri-javatra tsy manam-paharoa ny modely fifandraisana plug-and-play, mamorona ny fahafaha-mifanakalo sy mampiasa ny karazan-tariby fifandraisana misy tariby tariby sy tsy misy tariby, mety ho an'ny mpanjifa C&I haben'ny habeny.
LY-SM350 postpaid andiana metatra dia marina amin'ny fandrefesana & fanaraha-maso ny enta-mavesatra sy ny fari-pifandraisana ary koa ny fanoherana ny fanelingelenana, mahatonga azy ireo ho tsara ho an'ny vahaolana amin'ny fanangonana vola sy fiarovana. Natao mifanaraka tanteraka amin'ny fenitra DLMS / COSEM sy IDIS izy ireo ary voamarina miaraka amin'ny mari-pahaizana DLMS, MID, IDIS mba hiantohana ny fifandraisan'izy ireo amin'ny sehatra AMI.
momba ny antsika
Factory: No. 666 Linyang Road, Qidong, Faritanin'i Jiangsu 226299, Sina
Foibe: 18F, tranobe 1, Zhengda Wudaokou Plaza, No. 1199 Minsheng Road, Pudong New Area, Shanghai 200135, Sina
Raha te-hahazo ny vaovao farany ianao dia fenoy eto ambany ny takelaka etsy ambany.